काभ्रेका स्थानीय तहलाई प्रश्न: नागरिकलाई भोकबाट जोगाउने योजना चाहिँ खै ? – मिलिजुली खबर
काभ्रेका स्थानीय तहलाई प्रश्न: नागरिकलाई भोकबाट जोगाउने योजना चाहिँ खै ?
in गृहपृष्ठ, फिचर, समाज
कोरोना भाईरसको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएपछि मुलुक भर नि षेधाज्ञा छ । काभ्रेका ६ वटै नगरपालिका शिल गरिएका छन् । त्यस्तै केहि गाउँपालिका पनि शिल गरिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा पहिले बनेपा नगरपालिकाले आफ्नो सबै क्षेत्र पूर्ण रुपमा शिल गर्यो ।
पहिलो चरणको शिल गरिएको समय बनेपामा भोली सकिदैछ । तर फेरी शिल अवधि थपेर जेठ १७ गतेसम्म पुर्याएको छ । बनेपा नगरपालिका काभ्रे जिल्लाकै धेरै मानिसको बसोबास रहेको नगरपालिका पनि हो । यहाँ दैनिक ज्यालादारी गरी खानेको संख्या पनि उत्तिकै छ । शिल गरिएसँगै उनीहरूको रोजीरोटी पनि गुमेको छ । बनेपामा काभ्रे जिल्लाभित्रका मात्रै होइन देशका विभिन्न ठाउँबाट कामका लागि आएको संख्या पनि ठूलै छ ।
हो अहिले बनेपामा कोरोना भाईरस भुसको आगो जस्तै सल्कि रहेको छ । यसको चेन ब्रेक अर्थात् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नफैलाउने उपाय शिल बाहेक अर्को देखिँदैन । बनेपामा डेरा गरी बस्ने । दिनभरी ज्यालादारी काम गर्नेको संख्या पनि कम छैन् । अहिले सबै क्षेत्र ठप्प छ ।
जिल्लाको पनौती, धुलिखेल, पाँचखाल, मण्डनदेउपुर र नमोबुद्ध नगरपालिका पनि शिल गरिएको छ । बनेपा हेरिकन जिल्लाको अरू नगरपालिकामा अन्य ठाउँबाट कामका लागि आईबस्नेको संख्या केहि कम छ । तर धेर-थोर भन्ने मात्रै हो । छाक टार्नै अप्ठ्यारोमा पर्ने परिवार गाउँपालिकाको तुलनामा सहर उन्मुख जिल्लाका सबै नगरपालिकाहरुमा ज्यादा देखिन्छन् ।
धुलिखेल र पनौतीमा गाडी मजदुर धेरै छैन् । नि षेधाज्ञासँगै उनीहरूको काम पनि बन्द छ । कतिपय त अघिल्लो बर्षको जस्तै अवस्था आउने पूर्व अनुमान लगाएर गाउँ फर्किएका छैन् । तर बनेपा, धुलिखेल, पनौती, पाँचखाल लगायतका सहरमा निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर अझै पनि छन् । यो सहरीया मजदुरीका कुरा भए गाउँ गाउँमा पनि निम्न आय भएका घरपरिवार छ्न् । जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले बैशाख १९ गतेदेखि नि षेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रशासनले नि षेधाज्ञाको समय जेठ २२ गतेसम्म पुर्याएको छ। काभ्रेमा अहिले पनि कोरोना सं क्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ । मृ त्यु दर पनि बढ्दो क्रममा छ ।
भुम्लु र रोशी गाउँपालिका पनि शिल गरिएका छन् । बेथानचोक गाउँपालिकाले पनि आफ्नो पालिकाभित्र निकै कडा गरेको छ । शिल गरिएका सबै स्थानीय तहले घर बाहिर समेत ननिस्कन सबैलाई उ र्दी जारी गरेका छन् ।
सबै स्थानीय तहले रोगबाट जोगिने उपाय त अपनाए जस्तो देखिन्छ । तर भोगबाट नागरिक बचाउने योजना कुनै पनि स्थानीय तहले बनाएको सार्वजनिक भएको छैन् ।
अहिले जिल्लाका कुन नगरपालिकाले राहतको के काम गर्दैन छन् ?
बनेपा नगरपालिकाले राहत सिफारिसको जिम्मा सबै वडाध्यक्षहरू दिएको छ । उपप्रमुख रेखा दाहालका अनुसार अघिल्लो पल्टको सिकाईलाई आधार मानेर यो पटक वडाध्यक्षहरूलाई सिफारिसको जिम्मा दिईएको हो ।
वडाध्यक्षले सिफारिस गरेपछि नगरपालिकाले दैनिक छाक टार्न समस्या झेलिरहेका घरपरिवारलाई सहयोग गर्नेछ । ‘अघिल्लो पटक राहत वितरण गर्दा गुनासो पनि आए, यो पटक त्यो गुनासो नआओस् भनेर वडाध्यक्षलाई जिम्मा दिएका छौ, वडाबाट आउने सिफारिसको आधारमा नगरपालिकाले समन्वय गरेर राहत उपलब्ध गराउँछ, उपप्रमुख दाहालले भन्नुभयो ।’
धुलिखेल नगरपालिकाले नि षेधाज्ञापछि समस्यामा परेको विवरण संकलन गर्न थालिसकेको नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले बताउनुभयो । नगरपालिकाले गाउँका निम्न वर्ग, सहरमा ज्याला मजदुरी गर्ने, अरू ठाउँबाट धुलिखेल आएर मजदुरी गर्नेको वितरण संकलन सुरु गरेको हो ।
नगरपालिकाले समस्या परेका वर्गको सहयोगका लागि विभिन्न संघ संस्था र दातृ निकायलाई समेत आव्हान गरेको छ । ‘हामीले नगरपालिकाभित्रका निम्न आय भएका, अरू ठाउँबाट आएर ज्यालादारी गर्ने, सहरीय गरिव घरपरिवारको वितरण संकलनलाई तीव्रता दिएका छौँ, एक हप्तामा यो काम सकेर हामी राहत वितरणमा केन्द्रीत हुन्छौँ, नगरप्रमुख ब्याञ्जुले भन्नुभयो ।
अघिल्लो बर्ष फूड बैंक स्थापना गरेर जिल्लामा उत्कृष्ट काम गर्यो पनौती नगरपालिकाले । तर समेत यो बर्ष भने दैनिक छाक टार्न समस्या झेलिरहेका घरपरिवारका लागि खास योजना बनाएको छैन् । ‘नगरभित्रका निम्न आयभएका घरपरिवारलाई कसरी सहयोग गर्ने, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले छलफल चलाइसेका छौँ, तर ठोस योजना बनेको छैन, अबको एक हप्ता नगरभित्र सं क्रमणको अवस्थालाई हेरेर उहाँहरूका लागि काम अघि बढाउँछौ, मेयर भिम न्यौपानेले भन्नुभयो ।’
पनौती नगरपालिकाले आफ्ना सबै वडाबाट विपन्न घरपरिवारको वास्तविक वितरण अघिल्लो पटक नै संकलन गरिसकेको छ । नगरभित्र २३८ घरपरिवार निम्न आय भएका छन् । ‘हामीसँग नगरपालिकाको कुन वडामा कति जना निम्न आय भएका घरपरिवार छन् भन्ने वितरण तयार छ, अघिल्लो पटक संकलन गरिएको खाद्यान्न भने बाँकी छैन, नगरप्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो ‘त्यसैको आधारमा समस्यामा परेका घरपरिवारलाई नगरपालिकाले सहयोग गर्ने छ ।’
पाँचखाल नगरपालिकाले छाक टार्न नसक्ने घर परिवारका लागि के गर्ने भनेर योजना बनाईसकेको छैन । उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारका अनुसार अहिले नगरपालिकाभित्र अन्य ठाउँबाट आएर खास गरी निर्माणको क्षेत्रमा ज्यालादारी गर्नेको संख्या निकै कम छन् ।
नगरभित्रका धेरै जसो कृषिमा निर्भर छन् । पाँचखाल कृषि उत्पादनका हिसाबले निकै राम्रो क्षेत्र मानिन्छ । ‘पाँचखालमा यो पटक नि षेधाज्ञामा अघिल्लो बर्षको जस्तो अन्य ठाउँबाट काम गर्न आएर समस्यामा पर्नेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन, नगरपालिका शिल गरिएपनि सडक र अन्य निर्माणको क्षेत्रमा काम रोकिएको छैन्, कसैलाई दैनिक छाक टार्नै समस्या भएको पाईए त्यसको ब्यवस्थापन गर्न नगरपालिका सक्षम छ, उपप्रमुख दनुवारले भन्नुभयो ।’
नमोबुद्ध नगरपालिकाले पनि कुनै योजना बनाएको छैन । को रोनाको दोस्रो लहरबाट नगर र उपप्रमुख नै सं क्रमित बन्न पुगे । अघिल्लो पटक कार्यविधि नै बनाएर नगरपालिकाले राहत वितरण गरूको थियो । तर यो पटक १४ दिनसम्म होम आईसोलेसनमै बस्नु परेका कारण पनि राहत वितरणका वियषमा ठोस योजना नबनेको हो ।
उपप्रमुख रामदूवी तामाङका अनुसार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम गर्न दिइएको छ । ‘ अहिलेसम्म दैनाक छाक टार्न समस्या परेको कुरा जानकारीमा आईसकेको छैन, अर्को कुरा नगर प्रमुख र म नै सं क्रमित भएर होम आईसोलेसन बस्नु पर्यो, यस गर्दा अघिल्लो बर्षको जस्तै योजना बनिसकेको छैन्, अब योजना बनाउनुपर्छ, उपप्रमुख तामाङले भन्नुभयो ।’
अघिल्लो बर्ष मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले इँटा भट्टमा काम गर्ने मजदुर र निम्न आयस्रोत भएका घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको थियो । तर यो पटक मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले पनि बिशेष योजना बनाईसकेको छैन ।
अहिलो कुरा नागरिकलाई रोकबाट जोगाउनु पर्ने दायित्व भएको नगर प्रमुख टोक बहादुर वाईबाले बताउनुभयो । ‘सुरूमा नागरिकलाई रोगबाट नै जोगाउने भनेर लागि परेका छौँ, राहतका बारेमा सोचिसकेका छैनौँ, पालिकाभित्र सं क्रमणको दर हेरेर शिल अवधि थप्ने नथप्ने निर्क्यौल हुन्छ, शिल अवधि थप्दै जानु पर्ने अवस्था आई लाग्यो भने स्वभाविक रूपमा राहतको योजना पनि नगरपालिकाले बनाउँछ, नगरप्रमुख वाईबाले भन्नुभयो ।’
महाभारत गाउँपालिकाले भन्यो 'सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन बैंकमा खाता खोल्नु'
बेथानचोक गाउँपालिका आजदेखि शिल (पालना नगरे यस्तो हुनेछ कार बाही)